चिन र भारत आमने-सामनेको अवस्थामा, युद्ध भए कति खतरनाक ?
काठमाडौं । भारत र भुटानसँगको सीमाक्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार सुरु गरेपछि पछिल्लो विवाद चर्किएको छ । चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा चीनले बनाइरहेको सडकले आफ्नो भूमि मिचिएको भुटानको दाबी छ ।
पछिल्लो अवस्था : दोकलाम क्षेत्रमा चीन र भारत दुवैका सेना तैनाथ छन् । अहिले....
धामी भन्छन्– ‘महिनावारी नबार्दा समस्या आइलाग्यो ? अब घरमा छाउ बार्नू’
दैलेख । दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकास्थित लैनचौरमा शान्ता कठायत नाम चलेकी माता अर्थात् धामी हुन् ।
गाउँले बिरामी हुँदा होस् वा समस्यामा पर्दा उनै माताको शरणमा पुग्छन् । आफूकहाँ हेराउन आउनेलाई माताको एउटै सुझाव हुन्छ, ‘महिनावारी नबार्दा समस्या आइलाग्यो ? अब घरमा छाउ बार्नू ।’
एउटै बाघले १९ जनाको ज्यान लियो
चितवन । बाघ धर्तीको सुन्दर जनावर हो । बाघलाई हिंस्रक वज्यजन्तुको रुपमा पनि चिनिन्छि । सबै बाघ मान्छेकै ज्यान लिने हिंस्रक हुँदैनन् । हिंस्रक भईहालेमा अल्पिनीय घटना पनि हुन सक्छ । भनिन्छ, बाघ हिंस्रक भयो भने यसलाई रोक्न सकिँदैन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा रहेका....
शिक्षा अधिकारीमाथि भयो यस्तो प्रहार
जनकपुरधाम । अवैध निजी विद्यालयलई कारबाही किन गरेको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई कार्यालयकै नयाब सुब्बाले चप्पल प्रहार गरेका छन् ।
उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी मेहीलाल यादवलार्य सोही कार्याल्यमा विद्यालय प्रशासन फाँटमा कार्यरत नासु अनिलकुमार रायले बिनादर्ता सञ्चालमा रहेका विद्यालयलार्य भन्दै कार्यकक्षमै सोमबार....
यस्तो बन्दैछ सबै विवरण रहने स्मार्ट कार्ड
काठमाडौं । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड)को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।
सरकारले भदौबाट डिजिटल....
सरकारले किन्ने भयो रेलको इन्जिन र डब्बा
काठमाडौं । सरकारले बर्दिवासभन्दा केही पर बिजलपुरादेखि जनकपुर हुँदै भारतको जयनगर (बिहार) सम्म रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि ब्रोडगेज रेलको इन्जिन (लोकोम्याटिभ) र डब्बा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि रेल्वे विभागले सरकारसंग तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
रेलवे विभागका सिनियर....
बैतडी । नगरपालिका भएर पनि विकासका कुनै कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् यो ठाउँमा, विपन्नतामा बाँचेको परिवारले देवकी त्रिवालाई कलम समात्ने अवसरसम्म दिन सकेन । १५ वर्षमै विवाह र महिना दिनमै गर्भवती बन्नु नियमजस्तै बने उहाँका लागि । देवकीले बर्से्नि जन्माएका शिशुहरूको निसास्सिएर र कठ्यांग्रिएर ज्यान....
१६ बर्षमै ३ पटक गर्भपतन
बैतडी । बैतडीको सिगमास गाउँपालिका २ धौलाडीकी मनीषा नाम परिवर्तन १६ बर्ष पुगिन् ।
उनी अहिले चौथोपटक गर्भवती छन् ।
१३ बर्षमै बिहे गरेकी उनको उनको गत फागुनमा तेस्रोपटक गर्भ खस्यो । उनी जेठमा फेरि गर्भवती भएकी छन ।
उनकी देउरानी आशा....
बढ्दो गर्मीले जनजीवन प्रभावित
विराटनगर । तीन दिनदेखि बढेको गर्मीले विराटनगरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । एक साता पहिलेको भारी वर्षपछि बढ्दै गएको गर्मी तीनदिनयता असह्य बन्दै गएको हो । हावासमेत नचलेका कारण दिनप्रतिदिन गर्मीको पारो चढ्दो छ । गर्मीका कारण निर्माण क्षेत्रका मजदुर, रिक्सा चालक, कृषि क्षेत्रका मजदुर....
काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकार विस्तारमा ढिलाइ नगर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद सुल्झिएको छैन ।
यस्तोमा देउवालाई पार्टीबाटै मन्त्री....